हिसानअन्तर्गतका विद्यार्थीलाई एनसेलको विशेष अफर
काठमाडौं (अस) । एनसेल र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) बीच अनलाइन शिक्षा तथा सिकाइका लागि एनसेलको मोबाइल कनेक्टिभिटी प्रयोग गर्न समझदारी भएको छ ।
अनलाइन कक्षा तथा सिकाइका लागि विद्यार्थी, शिक्षक÷शिक्षिका र विद्यालयहरूलाई सुलभ दरमा मोबाइल सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यअनुरूप एनसेलले हिसानसँग समझदारी गरेको बताएको छ । समझदारी अन्तर्गत एनसेलले विशेष मासिक योजना प्रदान गर्ने भएको छ । योजनामा भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवाहरू बन्डलसहितको सेवा हुने छ ।
योजना अन्तर्गत विद्यार्थीले मासिक रू. २५० (करबाहेक) मा अनलाइन कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने जुम, गुगल मिट र माइक्रोसप्mट टिम्स प्रयोगका लागि २० जीबी डेटा, १ जीबी थ्रीजी र फोरजी डेटा, २ जीबी फोरजी डेटा, सीयूजी नम्बरमा कल गर्न हरेक दिन १२० मिनेट टकटाइम, ५० मिनेट अन नेट टकटाइम र ५० अन नेट एसएमएस सेवा पाउने छन् ।
यसैगरी मासिक रू. ३५० (करबाहेक) को योजना पनि एनसेलले उपलब्ध गराएको छ । समझदारी अनुसार हिसानको सिफारिसपत्रका आधारमा सम्बन्धित विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक वा शिक्षिकाहरूले यो सेवा लिन सक्ने एनसेलले बताएको छ ।